logmein အကြောင်း ( အဝေးမှကွန်ပျူတာကို ထိန်းသည့် software နှင့် အသုံးပြုပုံ) | မြန်မာဖောင့်ယူရန.် Myanmar Font | Myanmar Typing ~ ITmanHOME
04:20 Network, နည်းပညာ No comments
logmein အကြောင်း ( အဝေးမှကွန်ပျူတာကို ထိန်းသည့် software နှင့် အသုံးပြုပုံ) | မြန်မာဖောင့်ယူရန.် Myanmar Font | Myanmar Typing
ကျွန်တော်က ပထမဦးဆုံးပြောမယ့် အကြောင်းကတော့logmein ဆိုတဲ့ဆော့ဝဲလေး အကြောင်းပါ။ ဒီဆော့ဝဲလေးက နိုင်ငံတွေ ဘယ်လောက်ပဲကွာဝေးနေပါစေ လှမ်းပြီးတော့ ကိုယ့်ရှေ.မှာသုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာလိုမျိုးအဝေးကနေ ကိုင်တွယ်ပြီး ပြသနာတွေကို ဖြေရှင်း ပြင်ဆင်ပေးလို. ရပါတယ်။
* www.logmein.comကိုဝင်ပါ။ ပြီးရင် Download logmein free ဆိုတဲ့ အစိမ်းရောင် အကွက်လေးကိုကလစ်လုပ်ပါ။ ပြီးရင် အီးမေးလ် တို. ဘာညာတို. ရိုက်ပြီး အကောင့် ဖွင့်ပါ။ပြီးရင် Go ကို နှိပ်။
* computer access code ဆိုပြီးတောင်းရင် ပေးချင်တဲ့ password 8လုံးပေးလိုက်ပါ။ အောက်မှာလည်း အဲ ဒီ 8 လုံးပဲ ပြန်ရိုက်။ ကိုပေးထားတာတော့မှက်ထားဦးနော်။
* Email တောင်းရင် ခုနက အကောင့် ဖွင့်တုန်းကပေးခဲ့တဲ့ အီးမေးကို ပြန်ထည့်။ password ကလဲ အကောင့်ဖွင့်တုန်းကပေးတဲ့password ပဲအင။ ပြီးရင် Next ကို မနှိပ်နဲ.ဦး။ logmein freeeဆိုတာရွေးပေးလိုက်ဦး။ ပြီးမှ Next လုပ်။
* အင်စတောလုပ်ပြီးသွားရင်Restart ချရလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် ပြီးသွားပါပြီ။ Task Bar ရဲ့ ညာဘက်အောက်မှာခွေးခြေရာ ပုံလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။
Posted by Mr.virus
မြန်မာဖောင့်ယူရန် download ifile.it
မြန်မာတိုက်ပင်းကို ဒီမှာhttp://ifile.it/ej59ugo/Myanmar_Typing.rar ယူပါ။